Pitso: UBilliat ufuna ukuyishiya iSundowns | News24
Cape Town – Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uPitso Mosimane usekuqinisekisile ukuthi isethenjwa saleli qembu, uKhama Billiat, uyanqaba ukusayina isivumelwano esisha futhi ufuna ukuyishiya le kilabhu.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala unonyaka owodwa omsalele kwinkontileka yakhe kanti kubukeka sengathi usefuna inselelo entsha, nalapho kubhekwe ukuthi lo mdlali weqembu lesizwe eZimbabwe ayodlala e-Europe.
“Uma ngabe evuselela sizomamukela, ungumdlali omuhle, kodwa ufuna ukushiya futhi akafuni ukuvuselela,” uMosimane usho kanjalo ngemuva kokudliwa kweSundowns okuthuse abaningi ikhishwa yiMaritzburg United emqhudelwaneni we-MTN8 esigabeni sama-quarter-final.
“Yini enye esingayenza? Yimpilo le. Salahlekelwa uKatlego Mphela, saqhubeka sase sawina izinkomishi. Salahlekelwa u-Elias Pelembe futhi sawina izinkomishi.
“Salahlekelwa uLebogang Mokoena, sawina izinkomishi. Salahlekelwa uRamahlwe Mphahlele sasesawina iChampions League. Salahlekelwa uBongani Zungu sase sawina iligi. Sizolahlekelwa abadlali, kodwa sizoqhubeka nokuwina.
“Kodwa singathanda ukuthi ahlale, sifuna ahlale futhi sicabanga ukuthi uzohlala. ISundowns iqinile. Nami ngizohamba bese omunye umuntu asale awine iligi. Ngakho, impilo iyaqhubeka.”
Manje iSundowns isizogxila emdlalweni we-Absa Premiership nalapho izotholana khona phezulu neSuperSport United ngoMgqibelo kulo mdlalo ozoqala ngo-15:00.